Madaxweyne Xasan Sheekh :”Maalin walba waxaa dhiirada hooyooyin iyo aabayaal” – idalenews.com
Madaxweyne Xasan Sheekh :”Maalin walba waxaa dhiirada hooyooyin iyo aabayaal”
Muqdisho(INO)- Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, ayaa dadka Somaliyeed ku ammaanay in ay ka qayb qaadanayaan dagaalka lagula jiro Ururka Al Shabaab.
Madaxweynaha Somaliya oo xalay shir jaraa’id ku qabtay Madaxtooyada Magaalada Muqdisho, ayaa marka hore shacabka ugu yeeray inay dulqaad muujiyaan, sababo ku aadan xiritaanka wadooyinka Caasimadda, haddii Caasimadda Muqdisho ay toddobaadkan ku kulmayaan Madaxda Wadamada Igad.
“Waxaan dadka Somaliyeed ka codsaday maalin dhaweyd dulqaad in loo muujiyo arrin ku saabsan Shir Goboleedka Igad, ee Madaxda Igad isugu imanayaan Magaalada Muqdisho. Waxaan markale dadka leeyahay arrintaasi aan soo dhaweyno, dulqaad aan ka muujino.” Ayuu yiri Madaxweynaha Somaliya.
Madaxweynaha, ayaa yiri “Cadowga Somaliya inuu kufiyo oo uu ceebeeyo doonayo yaanan gacan ku siinin, aan ka hortagno, aan ka dhicino, kana celino dalkeena.”
Waxaa uu hoosta ka xariiqay in dagaalo xoog leh oo ka dhan ah Ururka Al Shabaab ay ka soconayaan dalka, iyadoo sida uu sheegay ay ka wada qayb qaadanayaan Ciidanka Xoogga Dalka iyo shacabkaba.
“Dagaalka lagula jiro cadowga umadda Somaliyeed ee Al Shabaab, asaguna beryahaan dambe Jamhuuriyadda daafaheeda kala duwan oo dhan dagaalo xoog leh ayaa ka socdo, geesiyada Xoogga Dalka iyo guud ahaan shacabka Somaliyeed ay meelkasta kula dagaalamayaan.” Ayuu yiri Madaxweynaha Somaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa yiri “Maalin walba waxaa isa soo dhiiba Saraakiil ka tirsan cadowga, maalin walba waxaa gacanta lagu soo dhigaa kuwo si khasab ah goobaha dagaalka loogu soo qabto.”
Madaxweyne Xasan Sheekh, ayaa waalidiinta Somaliyeed ku ammaanay in ay soo sheegaan caruurta ka maqan ee ku biirtay Al Shabaab iyo weliba goobaha ay dalka kaga sugan yihiin.
“Maalin walba waxaa dhiirada hooyooyin iyo aabayaal tilmaama carruurtoodii, halkii ay ku dambeeyeen iyo meesha ay jooggaan. Umadda Somaliyeed markale guulahaas iyo dadaalkaas ay ugu jiraan, sidii loo ciribtiri lahaa cadowga umadda, waxaan leenahay hambalyo, waana ku bogaadinaynaa. Waxaan leenahay aad iyo aad ayaad ugu hagaagsan tihiin wadadaas, ee wadadaas hala sii qaado oo halagu socdo.” Ayuu yiri Madaxweyne Xasan.
Daawo: Hillary Clinton oo si deg deg uga baxday xaflad ka socotay New York